09/22/12 ~ Myanmar Forward
ရခိုင်ပြည်နယ့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပ
Posted by drmyochit Saturday, September 22, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရခိုင်ပြည်နယ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန် လည်ထူထောင်ရေး၊တရားဥပဒေစိုး မိုးရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံခိုင်မြဲသော ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အလုပ် ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကိုယနေ့ နံနက်၉း၀၀ က နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ MICC ခန်းမတွင် ကျင်းပရာဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက“ရခိုင်ဒေသ တွင်းဒေသခံတွေအနေနဲ့ မူလအခြေအနေ ရောက်အောင်၊ပြီးတော့မူလ အခြေအနေထက်ပိုမိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေရောက်အောင် အချိန်တစ်ခုတော့ ပေးရပါ လိမ့်မယ် ဟုပြောကြားသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများတက်ေ၇ာက်သည်။ အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက “ရခိုင်ဒေသတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
လိုအပ်နေတာတွေလဲရှိနေပါတယ်။ ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့အင်တိုက်အားတိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရပါမယ် ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေ သက်ဆိုင်သူတွေပုးပေါင်းဆောင် ရွက်ရမှာပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှာ လူအဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ်ရဲ့ ယခင်ကတည်းကရှိခဲ့ကြတဲ့ ပဋိပက္ခ တွေကနေစတာပါ။ အခုဖြစ်စဉ်မျိုးကို မြန်မာပြည်မှာသာမကဘဲ ကမ္ဘာအနှံအပြားကနေရာဒေသအချို့မှာ ပါရင်ဆိုင် နေကြတာပါ။ ရခိုင်ဒေသဟာသယံဇာတကောင်းမွန်တယ်။လူသားအရင်းအမြစ်အားနည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒေသခံ တွေ ပြည့်စုံဖို့ လူမှုစီးပွားကောင်းမွန်တိုးတက်ဖို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ရရှိမှာပါ။”ဟု အမှာစကားတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
အင်ဒိုနီးရှား ရှေးဟောင်း ဘိုရိုဘိုဒါ ဘုရားကျောင်း ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ
Posted by drmyochit Saturday, September 22, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံရှိ ဘိုရိုဘူဒါ (Borobodur) ရှေးဟောင်း ဘုရားကျောင်း အဆောက် အဦးကိုတိုက်ခိုက်ရန် အကြမ်း ဘက် သမားများက ခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟု အင်ဒိုနီးရှား ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့က ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားလိုက်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားမှ Military Commander Brig. Gen. Adi Widjaja သောကြာနေ့ က ပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံခြာသားများ အများဆုံး လာရောက်အဆိုပါ အဆောက်အဦးကို အဓိက ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ရန် ကြံရွယ်နေ သည်ဟု ပြောသည်။ ယခုအခါ အင်ဒိုနီးရှား ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်လာနိုင်မည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းနေသည်ဟု ပြောသည်။
ရရှိထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ယခု အခါ လေ့လာ သုံးသပ်နေပြီး ရရှိထားသာ အချက်အလက်များမှာ တိုက်ခိုက်မည့် အစီအစဉ်မျိုး ရှိနေသည်ဟု မပြောနိုင်သေးကြောင်း Adi Widjara ပြောသည်။
ယူနက်စကို (UNESCO ) မှ ကမ္ဘာ အမွှေအနှစ် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ဘိုရိုဘိုဒါ ဘုရားကျောင်းအား ၁၉၈၅ နှစ်က တစ်ကြိမ် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မူအား အကြမ်းဘက် အဖွဲ့ Ibrahim (or) Mohammad Jawad alias Kresna အဖွဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စေတီတော် ၉ဆူပျက်စီးခဲ့ ရသည်ဟု သိရသည်
သောကြာနေ့က ပြစ်ဒဏ်တွေချခဲ့တာမှာ တပ်မတော် ဦးစီးချုပ်ဟောင်း Cetin Dogan၊ လေတပ် အကြီးအကဲဟောင်း Ibrahim Firtina နဲ့ ရေတပ်အကြီးအကဲဟောင်း Ozden Ornek တို့ကို ထောင်ဒဏ် တသက် ပထမ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှု မအောင်မြင်တဲ့ အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ပြစ်ဒဏ်တွေကို အနှစ် ၂၀ စီ လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ တခြား လက်ရှိနဲ့ စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေကိုတော့ ဒီထက် လျှော့ပေါ့တဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေပေးခဲ့ပါတယ်။၊ စစ်အရာရှိ ၃၄ ယောက်ကို တော့ တရားသေလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Sledgehammer လို့ လျို့ဝှက် နာမည်ပေးထားတဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ပူပေါင်းကြံစည်မှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ၂ နှစ်ကြာ အမှု စစ်ဆေးမှုလုပ် ခဲ့အပြီးမှာ ခုလို ပြစ်ဒဏ်တွေကို ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdogan အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ စစ်တပ်က ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ တူရကီအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ မှ ကော့သောင်းမြို့ သို့ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် ( ယနေ့ ) နံနက် ၆ နာရီတွင် ထွက်ခွါသွားသော Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုကြာင့် မြိတ်လေဆိပ်မှ ဆက်မထွက်နိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ “ အင်ဂျင် ပါဝါကျတယ်လိုတော့အကျဉ်းဖျင်းသိထားတယ် ။ အခုမြန်မာ့လေကြောင်းက M-16 လေယဉ်ငှား ထားပြီးကော့သောင်းထိ ပို့ ပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်” ဟုAir KBZ လေကြောင်းလိုင်း မြိတ်ရုံးခွဲမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းသည် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် နံနက် ၆ နာရီကျော်တွင်ရန်ကုန်မြို့ မှထွက်ခွာခဲ့ပြီး မြိတ်မြို့အရောက် တွင် ကော့သောင်းမြို့ သို့ ဆက်လက်မပျံသန်းနိုင်ဘဲ ခရီးသည် ၆၀ ဦးခန့်စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပုဏ္ဍားကျွန်းတွင် ရထားတွဲ တိမ်းမှောက်၊ ခရီးသည် တချို့ ဒဏ်ရာရ
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဍားကျွန်းနှင့် ယိုးတရုတ်အကြား ပြေးဆွဲနေသော ရထားနောက်တွဲ လမ်းချော် တိမ်းမှောက်လဲ သွားသဖြင့် ခရီးသည် တချို့ ဒဏ်ရာ ရရှိသွားခဲ့သည်။
“ အမျိုးသမီး ၅ ဦး၊ ကလေး ၂ ဦးနဲ့ အမျိုးသား ၃ ဦး စုစုပေါင်း ၁၀ ဦးခန့် ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့ပါတယ်။ အတွင်းလူနာ အဖြစ် တင်ရတာကတော့ တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး” ဟု ပုဏ္ဍားကျွန်း မြို့နယ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးထွန်းထွန်းက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။ ရထားသည် ခရီးသည်များကို တင်ဆောင်ပြီး ပုဏ္ဍားကျွန်းမှ ယိုးတရုတ်သို့ နေ့လည်ပိုင် ၂ နာရီ ခန့်တွင် ထွက်ခွာလာရာ ကျောက်ဆိပ်နှင့် ယိုငုံကျေးရွာ အကြားတွင် လမ်းချော်ပြီး နောက်တွဲ တိမ်းစောင်းမှောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ “ နေ့လည် ၃ နာရီ လောက်မှာ ဖြစ်တာပါ။ ဖြစ်တာ ကတော့ မိုးတွင်းဆိုတော့ လမ်းက သိပ်မကောင်းတော့ လမ်းချော်ပီး မှောက်သွားတာလို့ ပြောပါတယ်” ဟု ဦးထွန်းထွန်းက ဆက်ပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရထားလမ်းများမှာ အသစ်တည်ဆောက်ခါစ ရှိသေးပြီး လမ်းများ ခိုင်ခန့်မူ မရှိသေးသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ကာ ပြုပြင်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးထွန်းထွန်းက ပြောသည်။ ပုဏ္ဍားကျွန်းနှင့် ယိုးတရုတ် အကြားတွင် တစ်ရက် နှစ်ကြိ်မ်နုန်းဖြင့် ရထား ပြေးဆွဲနေပြီး ဈေးနုန်းမှာလည်း ကျပ် ၅၀ သာ ရှိသဖြင့် စရိတ်သက်သာ၍ ဒေသခံများ ရထားကို အစီးများကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ပုဏ္ဍားကျွန်းမှ ကျောက်တော်ထိ ရထားဖြင့်သွားလာနိုင်သော်လည်း ယိုးတရုတ် ဘူတာတွင် ရထား ပြောင်းစီးရပြီး ပုဏ္ဍားကျွန်းနှင့် စစ်တွေ အကြားတွင်မူ ရထားဖြင့် သွားလာ၍ မရသေးကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်မဲမှ လူငယ်များအကြား မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနှုန်း မြင့်တက်နေ
Posted by drmyochit Saturday, September 22, 2012, under သတင်းများ | No comments
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းမှစတင်၍ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုများ သိသာစွာ များပြားလာ ကြောင်း ကျောက်မဲမြို့ခံများထံက သိရှိရသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများမှာ များသောအားဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များဖြစ်နေပြီး အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ်မှ အသက် ၃၅ အရွယ် ၀န်းကျင်အထိ သုံးစွဲသူများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
" ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆို (၁၄)နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမှာ အဖြူသုံးတတ်နေပြီ ဘယ် က ဘယ်လိုရတယ်ဆိုတာကို မပြောပြဘူး မိဘတွေကလဲ ကလေးကငယ်သေးတော့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိဘူးဖြစ်နေတာ '' ဟု အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူ ကိုမောင်(အမည်လွှဲ) ကပြောသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချသူများမှာ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းမဟုတ်ပဲ ဖုန်းဖြင့်အချိတ်အဆက်ပြု လုပ် ရောင်း ချ ကြောင်း အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကျောက်မဲဒေသခံလူငယ်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
'' တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ လူတွေက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ထိုင်နေတတ်တယ်၊ သုံးနေကြ လူတွေ က ဖုန်းဆက်ပြီးပြောပေးတယ်၊ သူတို့က အချိန်နဲ့နေရာကိုချိန်းပြီး တစ်ဆင့်ရောင်းတာ၊ သုံး တဲ့သူကိုယ် တိုင်က ဘယ်သူ ရောင်းပေးတယ်ဆိုတာတောင် မသိရဘူး အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲ လူငယ်တွေကြား ထဲ ရောက် လာ တာ'' ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
ကလေးသူငယ်နာ ရင်လူးဆေးဗူးတစ်ဗူးအရွယ်အစားရှိ ဗူးတစ်ဗူးလျှင် ငွေကျပ် ရှစ်ထောင်မှ တစ်သောင်း ၀န်း ကျင်ခန့်ဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နေကြကြောင်း ယခင် သုံးစွဲဖူးသူ အမည်မဖေါ်လိုသူ လူငယ်တစ် ဦးက ပြောသည်။
'' အစ်မတို့ရပ်ကွက်ထဲတော့ ဟိုတစ်လောကလာဖမ်းသွားတာတွေ့တယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို သူ့ အိမ်မှာအဖြူတွေနဲ့အတူမိတာ၊ ဒါပေမဲ့ ခုကနေရာတိုင်းမှာကို ကြားနေရတာ များများထပ်ဖမ်းစေ ချင် တယ်'' ဟု အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်နေ အသက်သုံးဆယ့် တစ်နှစ်အရွယ် ဈေးသည်အမျိုးသမီး တစ်ဦး ကပြော သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများမှာ ဘိန်းဖြူ ဘိန်းမဲ ရာမ(စိတ်ကြွဆေးပြား) ဆေးခြောက်နှင့် ဘိန်းဆီ ဟူ၍ အမျိုးအ စား ပေါင်းများစွာရှိပြီး သုံးစွဲမှုပမာဏပေါ်မူတည်၍ စိတ်ရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားတတ်ပြီး၊ ခုခံအားကျ ဆင်း မှု ရောဂါများ ကူးစက်ရောဂါ များ ဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်း အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်များ ၏ ပြောဆို ချက်အရ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) ကုမ္ပဏီမှ လာမည့်လ၌ ကျပ် တစ်သိန်း သုံးသောင်း တန် CDMA 800 MHzဖုန်းများ ရောင်းချပေးမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေကြောင်း ဖုန်းဈေးကွက်မှ သိရသည်။
ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှူပေးမည့် Operator အဖြစ် ဆောင်းရွက်လိုသော အဖွဲ့အစည်းများသည် ၀န်ဆောင်မှုလိုင်စင်ရရှိရေးအတွက် ဦးစီးဌာနနှင့်ဝန်ကြီးဌာနများ၌ လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
“လက်ရှိ MEC အနေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာအတွက် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသေး ဘူး အော်ပရေတာ အဖြစ် မသက်မှတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် MEC ကုမ္ပဏီက တန်ဖိုးနည်း ဖုန်း ရောင်းချ ပေးမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး” ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနရှိ အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) ကုမ္ပဏီမှ တန်ဖိုးနည်းမိုဘိုင်းဖုန်းများအား ရောင်းချပေးမည်ဟု ဖုန်း အရောင်းဆိုင်များ၊ရပ်ကွက်များနှင့်ဈေးများတွင် သတင်းများထွက်ပေါ်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိက ပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းအရောင်းအ၀ယ်ဈေးကွက်တွင် အောက်တိုဘာလ(၂)ရက်နေ့တွင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းသုံး သောင်းဖုန်းများ ထွက်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မင်္ဂလာဈေးဖုန်းအရောင်းဆိုင်များက သိရှိရသည်။
“ကျွန်မတို့တော့ ၂ ရက်နေ့လောက် ထွက်မယ်လိုကြားတယ်၊ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လားဆိုတာ တော့ မသိရှိ ရသေးဘူး၊ ခုလောလော ဆယ်တော့ အရောင်းအ၀ယ်တွေပါးနေတယ်” ဟု မင်္ဂလာဈေးအတွင်း ဖုန်း အရောင်း ဆိုင်တစ်ခုမှ တာဝန်ရှိအမျိုးသမီး တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုနှစ်တွင် ပုဂံဇုန်သို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဝင်ရောက်မှု သုံးပုံတစ်ပုံခန့် မြင့်တက်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပွင့်လင်းလာသောအခြေအနေများကြောင့် ယခုနှစ်သြဂုတ်လတွင် ပုဂံဇုန်သို့ နိုင် ငံခြားသား ဧည့်သည် များဝင်ရောက် လည်ပတ်မှုမှာ ယခင်နှစ်သြဂုတ်လထက် သုံးပုံ တစ်ပုံခန့် ပိုမိုများပြားလာကြောင်း သိရသည်။
ယခင်နှစ်သြဂုတ်လတွင် နိုင်ငံခြားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမှာ (၆၃၄၉)ဦးရေရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် (၉၆၉၁) ဦးရောက်ရှိကြောင်း ပုဂံဇုန်ရှိ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရ သိ ရသည်။
''နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် အလာများတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း အရင်နဲ့မတူတော့ ဘူးလေ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးကသိနေတော့ စိတ်ဝင်စားပြီး လာကြတယ်'' ဟု မြန်မာနိုင်ငံဧည်လမ်းညွှန်များအသင်းမှ ဒုဥက္ကဌ ဦးဇော်ဝင်းချိုကပြောသည်။
ယခုလတွင် ပုဂံဇုန်သို့ အများစုလာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံခြားသားများမှာ ဥရောပနိုင်ငံ များဖြစ်သော ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီနှင့် စပိန်နိုင်ငံ များမှဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများထံက သိရသည်။
ယခင်လများတွင်မူ အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သော ထိုင်း၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နှင့်တရုတ်တို့မှ အများဆုံးလာရောက် လည် ပတ်ကြကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
လာရောက်လည်ပတ်ကြသော နိုင်ငံခြားသားဧည်သည်များမှာ ဟိုတည်များနှင့် တည်းခိုခန်းများ တွင်သာ တည်းခိုလေ့ရှိပြီး ဟုမ်းစတေးစနစ်ဖြင့် နေထိုင်မှု မရှိသေးကြောင်းကိုလည်းသိရသည်။
ဧည်သည်များအနေဖြင့် ပုဂံဘုရားများအားလိုက်လံကြည့်ရှုရာတွင် စက်ဘီးနှင့် မြင်းလှည်းများ သာငှားရမ်းမှု များပြီး ကုမ္ပဏီပိုက်ဆံဖြင့် လာရောက်ကြသူများသာ ကားဖြင့်လည်ပတ်လေ့ ရှိကြောင်း ဒေသခံများက ဆို သည်။
စက်ဘီးဖြင့်လည်ပတ်လျှင်တစ်ရက်ငှားရမ်းခနှုန်း(၅ဝဝဝ)ကျပ်နှင့် မြင်းလှည်းဖြင့်လည်ပတ်လျှင်တစ်ရက်ငှားရမ်းခနှုန်း (၁၅ဝဝဝ)ကျပ် ဈေးရှိကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
ပုဂံဇုန်တွင် နိုင်ငံခြားသားအသွားအများဆုံးနေရာများမှာ အာနန္ဒာဘုရားနှင့် ရွှေစည်းခုံစေတီတို့ဖြစ်သည်။
အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းများတွင် ယာဉ်ကြံ့ခိုင်မှုနည်းပြီးတန်ပိုတင်နေမှုကြောင့် ခရီးသည်များဒုက္ခရောက်
ရန်ကုန်မှ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသများသို့ ပြေးဆွဲသည့် အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းများတွင် စက်ပစ္စည်း ကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းခြင်းနှင့် တန်ပိုတင်ဆောင်မှုများကြောင့် ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးမှုများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိကြောင်း ခရီး သွားပြည်သူများထံက သိရသည်။
“ ရန်ကုန်ကနေ လားရှိုးကို ညနေလေးနာရီ ထွက်တဲ့ကားနဲ့ စီးလာတာ ပုံမှန်ဆိုရင် ကျောက်မဲမြို့ကို မနက် လေးနာ ရီ လေးနာရီခွဲလောက် ဆို ဖြတ်သွားပြီ၊ အဲ့ဒီနေ့ကဦး စီးလာတဲ့(….)ကားက လမ်းမှာ ခဏ ခဏ ရပ် ရတယ်၊ စက် ရပ် သွားရင်လည်း တစ်ခါပြန်နှိုးဖို့ကို အကြာကြီးပဲ၊ မနက်ကိုးနာရီအထိ ပြင်ဦးလွင်မှာ ရပ်ထားပြီး စက်ပြင်နေရတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်’’ ဟု ရန်ကုန်မှလားရှိုးသို့သွားသော ခရီးသွားပြည်သူတစ်ဦးကပြောသည်။
လမ်းခရီးကြန့်ကြာမှုများအပြင် ခရီးသည်တင်သောအဝေးပြေး ဘတ်စ်ကားများမှာ ကားဝမ်းဗိုက်အတွင်းတွင် ကုန် စည်များ ပါဝင်မှုကြောင့် အလေးချိန်ပိုတတ်ပြီး ကတ္တားချိန်ရသော တန်ပိုဂိတ်များတွင် ခရီးသည်ဆယ်ဦးခန့် လမ်း ဆင်းလျှောက်ရခြင်းများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။
``မနက်တစ်နာရီခွဲလောက်ကြီး အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေတုန်း စပါယ်ယာက ယောက်ျားလေး ဆယ်ယောက်လောက် အောက် ကိုခဏဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ပေးပါ..တဲ့၊ ကတ္တားမှာအလေးချိန်ပိုရင် ဒဏ်တပ်ခံရမှာစိုးလို့တဲ့၊ အမှန် ဆို ခရီးသည်တင်ကားပဲ ကုန်ပစ္စည်းကိုလျှော့တင်သင့်တယ်´´ ဟု ခရီးသွားရင်း အလေးချိန်စစ်ဆေးသော ကတ္တားတွင် ဆင်း၍ လမ်းလျှောက်ရသူ အသက်(၃၅)နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးကိုကိုက ပြောသည်။
အဝေးပြေးကားစီးနင်းရာတွင် ဆိုက်ရောက်ချိန်နောက်ကျမှုများရှိလာသဖြင့် ရောက်ရှိရာမြို့တွင် လာကြိုသော သူများနှင့် လွဲချော်မှုများ ဖြစ်လာပြီး နောက်ဆက်တွဲ လူမှုရေးပြဿနာများပါ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“ ကားသမားတွေက ကတ္တားချိန်တဲ့ နားမရောက်ခင် နည်းနည်းဝေးဝေးမှာ ခရီးသည်ကိုလမ်းဆင်းလျှောက် ခိုင်းတယ် ဂိတ်ကိုကျော်မှ ကားရပ်ပြီး ပြန်တင်တယ်၊တွေ့တော့ တွေ့နေရတာပဲ အရေးယူတာ တော့မကြားမိ သေးဘူး’’ ဟု ဂိတ်ဖြတ်သန်းခကောက်ခံသော ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းများ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အဝေးပြေးခရီးသည်တင်ကားများ များပြားလာသော်လည်း ခရီးသည်များများတင်နိုင်ရေးသား ဦးစားပေးလျက်ရှိကြောင်း စက်ပစ္စည်းကြံ့ခိုင်မှုအပိုင်းတွင် အားနည်းချက် များရှိနေသည့်အတွက် ရေရှည်တွင် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ခရီးသွားလာမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
အဝေးပြေးခရီးသည်တင်ကားများ လမ်းခရီးတွင် စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုများအတွက် သက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ် ဌာနများက အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ တိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးခြင်းမျိုး မရှိကြောင်းကိုလည်း အ၀းပြေးကားဂိတ်များက အတည်ပြုပြောဆိုကြသည်။
ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် စက်သုံးဆီဈေးမြင့်နေ၍ပဲခူးနှင့် ဧရာဝတီတောင်သူများအခက်တွေ့
ပဲခူးတိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးများတွင် စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတ်မြေသြဇာနှင့် အခြားဆက်စပ် ပစ္စည်းဈေး နှုန်းများ မြင့်တက်နေခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်း များဆက် လက်လုပ်ကိုင်ရန် အခက်အခဲ များဖြစ် ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
''နှစ်စဉ် ဓာတ်မြေသြဇာဈေးက ကျတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ အချိန်တိုင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဈေး တက် တယ်။ ဘာကြောင့်ညာကြောင့် ဈေးကျတယ်ဆိုတာကိုမရှိဘူး။ အခုတောင်သူတွေအကုန် ကုန်လုံး လိုလို စိုက်ပျိုး ဖို့်အတွက် အခက်အခဲတွေ ဖြစ်နေတယ်''ဟုနေပြည်တော် ရှားတောကျေးရွာ မှ တောင်သူ ဦးဝင်းမြင့်က ပြော သည်။
စက်တင်ဘာ ပထမပတ်တွင် ပုလဲတံဆိပ်ဓါတ်မြေသြဇာ တစ်အိတ်(ကီလို ၅ဝ ပါ)လျှင် ကျပ် (၂ သောင်း) ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိခဲ့ရာမှ စက်တင်ဘာလ တတိယပတ်တွင် ကျပ် (၂၃ဝဝဝ)ဝန်းကျင်ခန့်သို့ လည်းကောင်း၊ စက်တင်ဘာပထမပတ်တွင် စက်သုံးဆီ တစ်ပေပါ(ဂါလံ ၅ဝ ဝင်)လျှင်(၁၉ဝဝဝဝ ကျပ်)ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရာမှ တတိယပတ်တွင် စက်သုံးဆီတစ်ပေပါလျှင်(၁၉၅ဝဝဝ ကျပ်)သို့လည်းကောင်း အသီးသီးမြင့် တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
''မြေသြဇာဈေးတင်တက်တာ မဟုတ်ဘူး။ လယ်ရေများလို့ မောင်းထုတ်ဖို့အတွက် ရေစုပ်စက်သုံးရတယ်။ စက်မောင်းဖို့ ဆီဈေးကလည်း တက်နေတော့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့ကို တော်တော်စဉ်းစားနေရတယ်။ အခုနှစ် က သဘာဝဘေးလည်း ဆိုးဆိုးခံရတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းကလည်း အကုန်တက်နေတယ်''ဟု ဧရာဝတီတိုင်းဒေ သကြီး၊ မအူပင်မြို့နယ်မှ ကိုအေးသိန်းက ပြောသည်။
၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုနှစ်သည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တောင် ယာ များရေနှစ်မြုပ်ကာ နုန်းမြေများ တင်ကျန်ခြင်း၊ ယခုနှစ်တွင် စိုက်စရိတ်ချေးငွေတိုးမြင့့် ပေးသော် လည်း ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်နေမှုကြောင့် စိုက်စရ်ိတ်အတွက် အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး များမှ တောင် သူများ က ပြောဆိုကြသည်။
နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် စိုက်စရိတ်ချေးငွေအား ယခင်နှစ်များတွင် မိုးကာလ၌ တစ်ဧက ကျပ် (၄)သောင်း ထုတ်ချေး ပေးခဲ့ရာမှ ယခု ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခုနှစ်တွင် ကျပ် (၅)သောင်း တိုးမြှင့် ထုတ်ချေးပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကုန်စည်တင်ပို့သူများအနေဖြင့် တန်ဆာခမြင့်တက်ခြင်း၊ ကုန်တင်ယာဉ်များအနေဖြင့် စက်သုံးဆီဈေးမြင့်တက်ခြင်း၊ ရေကြီးရေ လျှံမှုများကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲခြင်း တို့ကြောင် ဒေသအသီးသီးရှိ အခြေခံလူသုံးကုန် ဈေးနူန်းများ မြင့်တက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စည်တင်ပို့ရောင်းချသူများက ဆိုသည်။
''တန်ဆာခတွေက အရမ်းများလာတယ်။ မနှစ်က ဒီအချိန်ဆိုရင်အေးဆေးပဲ။အရောင်း အဝယ်က လဲကောင်းတယ်။ အခုကဈေးတွေတက်လာတော့ အရောင်းအဝယ်လည်းပါးတာပေါ့''ဟု မြောင်းမြမြို့နယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်မှ ဦးမြင့်ကျော်က ပြောသည်။
စိုက်ပျိုးရေးဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်ဆေးဝါးများဈေးနူန်းမြင့်တက်သကဲ့သို့ စားသုံးမူ အဓိကထွက်ကုန် ဆန်၊ စပါး ဈေးကွက်မှာ လည်း ဈေးနူန်းများ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာပထမပတ်တွင် ဆန်ဈေးနှုန်းမှာ ဆန်ကြမ်း (၂၄ပြည်)ဝင် တစ်အိတ်လျှင် (၁၂၅ဝဝ ကျပ်) ရှိခဲ့ရာမှ စက်တင်ဘာလ တတိယပတ်တွင် (၁၇ဝဝဝ ကျပ်)သို့ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေမြို့ မေယုလမ်းမရှိ အစိုးရဋ္ဌာနဆိုင်ရာရုံးများတွင် ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုများ ဒလကြမ်းဖြစ် ပွားခဲ့
စစ်တွေမြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂလီအများဆုံးရှိနေသည့် ဘုမေရပ်ကွက်နှင့် ကပ်လျက်တည် ရှိ သော အစိုးရဋ္ဌာဆိုင်ရာရုံးများတွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လအရေးအခင်းမှစ၍ ယခုလ လဆန်းပိုင်းအ ထိ ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း
စစ်တွေမြို့ အဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် မေယုလမ်းမပေါ်တွင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံး၊ ပြည်နယ် စီမံကိန်းရုံး၊ ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၊ မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံး အစရှိသည့် ဋ္ဌာနဆိုင်ရာရှိရာ အဆိုပါရုံးများအနောက်ဘက်ရှိ ခိုင်ခန့်လုံခြုံမှုမရှိသော ခြံစည်းရိုးများကို ဖောက်ဖျက်ကာ ဘုမေရပ်ကွက်နေဘင်္ဂလီ လူမျိုးက ဖောက်ထွင်းခိုးယူခြင်းဖြစ် သည်။
ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးဆိုလျှင် ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိူင်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလီများ၏ မီးရှို့ရန်အကြိမ်ကြိမ် ကြံစည်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။ “ရုံးအနောက်ဘက်က ကျနော်တို့နေတဲ့အိမ်ခန်း(၀န်ထမ်းအိမ်ရာ)ကို ဖောက်ထွင်းခံရ တာပါ။ ထမင်းချက်ခန်းမှာထားတဲ့ သစ်တွေ၊ မီးသွေးအိတ်တွေ၊ ပလက်စတစ်ဇလုံတွေ အကုန် ပါသွားတယ်။ တန်ဖိုးအားဖြင့် သုံးသိန်းခွဲလောက်ရှိမယ်ခင်ဗျ”ဟု သြဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့က ဖောက်ထွင်းခံရသော ပြည်နယ်စီမံကိန်းရုံးမှ စာရေးကြီး တစ်ဦးက Coral Arakan ကိုပြော သည်။ ၎င်းကဆက်လက်၍ “နောက်နေ့ကျတော့ ကျနော်တို့ ဒီအနီးနားက လုံခြုံရေးတာဝန်ကျ တပ်သားတွေနေတဲ့ အုန်းခြံကို သွားတိုင်ပြီး အကျိုးအကြောင်းသွားပြောပြတယ်။ အဲဒီမှာ တာဝန်ကျတဲ့အရာရှိက လာကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ တစ်ခါမှပေါ်မ လာတော့ဘူး” ဟုဆိုသည်။ ယင်းဖောက်ထွင်း မှုများဖြစ်နေသည့်အချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိူင်ငံ ဒုတိယ သမ္မတစိုင်းမောက်ခမ်း စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိနေ သဖြင့် ဒုသမ္မတ လုံခြုံရေးကို အထူးဂရုစိုက်ပေးနေရချိန်ဖြစ်သည်။“ရဲအရာရှိတွေနဲ့ တွေ့လို့ အကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ ဒီအချိန်မှာ ဒုသမ္မတ လမ်းကြောင်း ကလွဲလို့ ကျန်တာ ဘာမှ အရေးမကြီးဘူး၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လုံခြုံရေး ယူထားရမယ်။ လူ (၃၀၀၀) အတွက် ရဲ (၁) ယောက်ပဲ ရှိတယ်”ဟု ပြန်ပြောလိုက်ကြောင်း အဆိုပါရုံးများမှ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက Coral Arakan ကိုပြောသည်။ “ဒီနားတ၀ိုက်က ရုံးတွေအကုန်လုံးနီးပါး အခိုးခံရတာပါ။ SB(ထောက်လှမ်းရေး) ရုံးတောင်မှပဲ ထမင်းအိုးတွေ ပါသွားတယ်လို့ကြားတယ်” ဟု မကျည်းမြိုင် ရပ်ကွက်နေ အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယခုလ (၃) ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံဖြိုးရေးဘဏ်မှ ရုံးစောင့် ဦးလှမောင်၏ နေအိမ် ဖောက်ထွင်းခံရကာ ထိုင်ခုံများနှင့် သစ်သား ကွပ်ပျစ်တစ်ခု အခိုးခံရကာ နောက်တစ်နေ့တွင် ထပ်မံ၍ အိမ်သာ၏ ဘေးဘက်နှင့် အနောက်ဘက်ရှိ ပျဉ်ချပ်များ ဖြုတ်ယူသွားခြင်းခံရသည်။ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ ကာလတန်ဖိုး ၂ သိန်းခန့်ရှိ သစ်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ သာသနာရေးရုံး ရေကန်မှ ၀ါးတန်းများ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံးမှ သောက်ရေအိုး နှင့်အ၀တ်အထည်များ ခိုးယူခံရသည်။ “ပြောရရင် တော်တော်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဗျာ၊ ဒီလို အစိုးရရုံးတွေ ဆက်တိုက် ဖောက်ထွင်းခံရတယ်၊ အခိုးခံရတယ်ဆိုတာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အားနည်း နေတာကို ပြတာပဲ” ဟု ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချရေးဦးစီးဋ္ဌာနရုံးမှ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက Coral Arakan ကို ပြောသည်။
အဆိုပါ ရေအရင်းအမြစ် အသုံးချရေး ဦးစီးဋ္ဌာနရုံးသည် (ဘင်္ဂါလီ)ဘုမေရပ်ကွက် အတွင်း တည်ရှိ နေသောကြောင့် ရုံးသူရုံးသားများ ရုံးမတက်ရဲသည့်အတွက်၊ ရုံးလုပ်ငန်းများအား ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်တွင် ယာယီ လုပ်ဆောင်နေရကြောင်းသိရ သည်။ ရေ အရင်း အမြစ်ရုံးနှင့် စက်မှုလယ်ယာရုံးသည် ဇွန်လ (၈)ရက်နေ့ အခင်း ဖြစ်ပွား ပြီး နောက်ပိုင်း ဆက်တိုက်လိုလို ဖောက်ထွင်းခံ ခဲ့ရ သည်။ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာရုံးများဖောက်ထွင်းခိုးယူခံနေရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခုလ(၄)ရက် နေ့တွင် ပြည်နယ်အစိုးရရုံးသို့ စာဖြင့်တိုင်ကြားခဲ့ပြီး (၅)ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။ ယခုလ (၆) ရက်နေ့ ညနေ (၈)နာရီခန့်တွင် ရဲတပ်သားအင်အား(၅၀) ခန့်နှင့် မကျည်းမြိုင်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ ဘုမေရပ်ကွက်သို့ ၀င်သွားရန် ပြုလုပ်စဉ် ရပ်ကွက်သားဘင်္ဂလီများက “ထွက်လာကြ၊ ထွက်လာကြ” ဟု အော်ဟစ်ကာ ထွက် လိုက်ကြသဖြင့် နောက်ပြန်ဆုတ်ထွက် လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဇွန်လ အရေးအခင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းရန် အရေးပေါ်ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်သည့် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် စစ်တွေမြို့သို့ နောက်တနေ့ စက်တင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိနေစဉ်မှာပင် ဘူးသီး တောင်မြို့နယ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ဘင်္ဂလီများ ဓါးဖြင့်လိုက်ခုတ်၍ ခြေထောက်တွင် ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရခဲ့သည်။ ယင်းနှင့်တဆက်တည်း ကျောက်တော်မြို့နယ် သရက်အုပ်ကျေးရွာတွင် ရခိုင်လူမျိုး ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်မောင်ချေသည် ဘင်္ဂလီများ လက်ချက်ဖြင့် လည်ပင်းပြတ်ရှဒဏ်ရာများ နှင့် ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံခဲ့ရ သည်။ စစ်တွေမြို့နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လအတွင်းက အသုဘပို့ဆောင်ပြီး ပြန်လာသည့် မော်တော်ယာဉ်တန်း အား ၎င်းဘုမေရပ်ကွက်ရှိ ဘင်္ဂလီများက စစ်တွေတက္ကသိုလ်ခြံဝင်း အနီးတွင် ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ရာမှ ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက် အရေးအခင်းသည် စစ်တွေမြို့သို့ စတင်ကူးစက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ် သည်။ စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသော ညမထွက်ရအမိန့် ပုဒ်မ (၁၄၄) ကို ယခုလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် ရုတ်သိမ်းမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသဖြင့် ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ရှိသည့် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်မှုများကို မြို့ပေါ်နေ ပြည်သူများ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် မှုများ ဖြစ်နေကြသည်။
Posted by drmyochit Saturday, September 22, 2012, under ကာတွန်းများ | No comments
တာပိန်မြစ် ရေအားလျှပ်စစ်အနီး အစိုးရတပ်အား KIA မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက် ၈ ဦးကျ
မြန်မာအစိုးရ တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်း တစ်ခုကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA မှ ယမန်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီချိန်တွင် မိုင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အစိုးရတပ်မှ ၈ ဦးသေ ဆုံးကြောင်း ရှေ့တန်းမှ အရာရှိတဦး ကချင် သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ တပ်မဟာ (၃) လက်အောက်ခံတပ်ရင်း (၁၅) မြန်မာအစိုးရတပ် တာပိန်ရေ အားလျှပ်စစ် တွင် လုံခြုံရေးယူထားသော တပ်မ (၉၉) တပ်ပေါင်းစုတပ်ကို အနီး ရာဘာခြံတွင် မှိုင်းဖောက်ခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် သေဆုံးမှုဖြစ် သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ဘက်က တစ်လုံးဘဲ ဖေါက်ကွဲလိုက်တာ တခါထဲ ၈ ယောက်လဲသွားတယ်။ ကျန်တဲ့သူနဲ့လည်း အနည်းငယ် ပစ်ခတ်ကြပြီး လက်နက်ကြီးနဲ့လည်း ၁ ခေါက် ၂ ခေါက် ပစ်ပြီးတဲ့နောက်ငြိမ်သွားတယ်” ဟု ရှေ့တန်းမှဆိုသည်။
ထိုမြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့အား တာပိန်ရေအားလျှပ်စစ်အနီးတွင် ကင်းလှည့်နေစဉ် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ မှိုင်းဖြင့် ပစ်၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု သိရသည်။
တာပိန်မြစ်ရေအားလျှစ်စစ်အနီးဝန်းကျင်တွင် မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့များသည် နေရာကွက်ကြား ၅ နေရာခန့်တွင် အင်အား၂၀ ကျော်ဖြင့် တပ်ချထားကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရတပ်လုံခြုံရေးနှင့် တပ်ချထားသည့် နေရာများသည် ဇိန်းခုန်းလမ်း (Zinghkung lam)၊ တာပိန်ရေအား လျှပ်စစ်ရုံး၊ ဆန်ဂန်ရွာ (Sang Gang)နှင့် ဗန်းမော်သွားလမ်းများ တွင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းနယ်မြေတွင်ရှိနေသော အစိုးရစစ်အင်အားများနှင့် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် ညတွင် ဗန်းမော်ဘက်မှ စစ်ကား ၄ စီး နှင့် အင်အား ၁၀၀ ကျော်ဖြင့် ထပ်မံရောက်ရှိလာသည့် တပ်သားများသည် ယနေ့ ဒေါ့ဖုန်းယန်ရွာအတွင်း ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများလည်းပြု လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ တိုက်ပွဲများသည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA တပ်ချထားသောနေရာတ၀ိုက် နှစ်ဖက် အသင့်အနေ ထားဖြင့် တင်းမာမှုများရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ရှိနေချိန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိနေကြောင်း KIA ဗဟိုအရာရှိများပြောသည်။
ကရင်နီ (ကယား) ပြည်နယ် အတွင်းတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုများ တွေ့ရှိရသည့်အနက် ဖရူဆို မြို့နယ် နှင့် ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တို့တွင် တခြားမြို့နယ်တွေထက် ပိုပြီးများပြားစွာ တွေ့နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက် နိုမ်နှင်းရေးစီမံကိန်းတွေကို ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေက ပြုလုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ ယခုချိန်ထိ လျော့ကျမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးအထူးတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ရဲအုပ်ဦးကံဝင်းက ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်း ဘိန်းစိုက် ပျိုးမှု အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းရရှိ ထားချက်အရ ယခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
"ဟိုယာတောင်ကြောဘက်နဲ့ ဒီမော့ဆို မြို့နယ်ဘက် က စိုက်ပျိုးတာများတယ်။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ကျနော် တို့ သတင်းရရှိမူအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ရ တာတွေ ဖြစ်တယ်။
လွိုင်ကော် မြို့နယ်မှာက သတင်းရပြီး တော့ မတွေ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေ ဆဲဖြစ်တယ်။ ယခုနှစ် ၂၀၁၂ဇွန်လှိုင် သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ သုံးလအတွင်းမှာ ဘိန်းရောင်းဝယ်ရေး အမှုပေါင်း ၁၂ မှုရှိတယ်။ တရားခံကအယောက် ၂၀
ယမန်နှစ်က ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲမှ ပြောကြား ချက်အရ ဘိန်းစိုက်ပျိုးနေကြတဲ့ စိုက်ခင်းနေရာတွေကို ဂြိုလ်တုကနေ ရိုက်ထားတဲ့ စားရင်းအရ ဒီးမော့ဆိုမြို့ နယ်အတွင်းတွင် (၁၇) နေရာ၊ ဖရူးဆိုမြို့အတွင်းတွင် (၅၇) နေရာတွေ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၎င်းနေရာ က လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့နေရာဖြစ်၍ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေးစီမံကိန်းများ သွားရောက်ပြုလုပ်ဖို့ လည်း ခက်ခဲတယ်လို့ သိရပါတယ်။
"ဒီးမော့ဆိုမြို့မှ ဒေသခံ တစ်ဦးက အနောက် ပဒေါင်ဘက်မှာကဘိန်းတွေကိုပဲ အဓိကစိုက်ပျိုးကြတာများတယ်။ ရွာတရွာဆိုရင် တစ်ရွာလုံးနီးပါးဘိန်း ကိုပဲစိုက်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ ရွာထဲကိုသူစိမ်းဧည့်သည် အရမ်းသွား လာလို့ မရဘူး။ သူတို့ ဆီကိုရောက်ရင် သူတို့ ရွာသားတွေကပဲ အပြတ်ရှင်းထုတ်သွားတာလဲရှိတယ် အများ
အားဖြစ် အဲဘက်ဂွင်တွေကလည်း အဖွဲ့စည်းတွေ တော်တော်များများထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ရဲတွေလည်းလာလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ပြောပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးလုံးဝ ပပျောက်ရေးစီမံကိန်းတခုအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ မူးယစ်ဆေးကင်းစင်တဲ့ ပြည်နယ်တခု ဖြစ်လာ ရမည်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။ ယခင်နှစ် စာရင်းပြုစုထားချက်အရ ဘိန်းစိုက်ခင်းဧက ၁၂၅.၅ ဧကကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါ တယ်။
Posted by drmyochit Saturday, September 22, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
အစိုးရနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသော်လည်း ငြိမ်း ချမ်းရေးမရနိုင်သေးခြင်းမှာ KIO ခေါင်းဆောင်များအတွင်း သဘောထားနှစ် မျိုးဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ် ပါတယ်၊ အစိုးရဘက်မှ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းဟာ KIO နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်၊ အစိုးရက စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး အလျှော့ပေးညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ သတင်းတွေကဆိုပါတယ်၊ ၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ အစိုးရက စစ်တပ်ကို ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုးစစ်မဆင်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ကချင်ပြည် နယ်နေရာအနှံ့စစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုံးဝရပ်တန့်သွားပါတယ်၊ ဒီအခြေအနေမှာ KIO က တစ်စခန်း ထလာပါတော့တယ်၊ ကြောင်မရှိလို့ ကြွက်ထတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။
လိုင်ဇာနဲ့ နီးစပ်သူတွထံက သိရှိရတဲ့သတင်းတွေအရ စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေ ရပ်တန့် သွားတဲ့ကာလ ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီး KIO အတွင်း သဘောထားကွဲလွဲမှုကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်၊ ဥက္ကဋ္ဌဇောင်းဟရားနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်တို့ဟာ အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့ လိုလားတဲ့သဘောရှိတယ်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင်တို့ကတော့ အစိုးရတပ်ငြိမ်နေတဲ့အခြေအနေကို အမိအရ အသုံးချပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွေ တိုးမြှင့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြတယ်၊ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဇောင်းဟရားဟာ အင်ဘန်လတို့အုပ်စုအပေါ် ဘာသြဇာမှမသက်ရောက်နိုင်ဘဲ မည်ကာမတ်တပ် ဟန်ပြသက်သက်သာ ဥက္ကဋ္ဌနေရာ ရပ်တည် နေရသူဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ထိ သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့သလဲဆို အစည်း အဝေးတစ်ခုမှာ ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင်နှင့် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်တို့ အချင်းချင်း ပစ်ကြခတ်ကြတဲ့ အထိဖြစ်ခဲ့တယ်၊ နိဂုံးချုပ်တော့ ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် လိုင်ဇာဆေးရုံ ရောက်သွားတယ်။
ဇောင်းဟရားနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်တို့က တစ်ကယ်တမ်းတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားတယ်၊ သူတို့ က နိုင်ငံရေးသမားတွေမို့ အတွေးအခေါ်ရှိတယ်၊ အမြင်လဲကျယ်တယ်၊ သူတို့နဲ့ သက်စွန့်ဆံဖျားလုပ်နေရတဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေက တစ်သဘောထားအတိုင်းပါပဲ၊ ခက်တာက ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင်တို့အုပ်စု၊ ဒီလူတွေက စစ်သွေးကြွတွေလို့ ပြောရင်လဲရတယ်၊ အစည်းအဝေးတွေမှာ တိုက်မယ်၊ ခိုက်မယ်၊ ဗုံးခွဲမယ်ပဲပြောပြီး၊ လက်ခုပ်လက်ဝါး တီးတာကို အရသာခံနေတတ်သူတွေပါ၊ သူတို့ထပ်တလဲလဲပြောနေတာက ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံစာချုပ်၊ သူတို့ခေါင်းထဲမှာ ဒါပဲရှိတယ်၊ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်မရှိဘဲ စစ်တိုက်ဖို့သက်သက်သာ သိတဲ့လူတွေပါ၊ KIO အတွင်း ဒီအုပ်စု ၂ စု ကွဲနေ တာကြောင့် အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမအောင်မြင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
KIO လုပ်လို့ ဖားကန့်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကုန်လုံးနီးပါး ပျက်ဆီးကုန်တယ်၊ ဖားကန့်လို ကျော်ကြားတဲ့ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းနယ်မြေဟာ၊ KIO ကြောင့် အတော်အရုပ်ဆိုးခဲ့ရတယ်၊ ကုမ္ပဏီတွေဆီက ဆက်ကြေးတွေ အဆမတန်ကောက်ပြီးတဲ့နောက် ဖားကန့်ဒေသရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လေး/ငါးရက်လောက်က ဖားကန့်မှာကျောက်စိမ်းတူးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေကို KIO က ကံဆီးကို ခေါ်တွေ့တယ်၊ လုပ်ကွက်ထဲကလူတွေ အကုန်ထွက်သွားရမယ်၊ ဘယ်သူမှမမြင်ချင်ဘူး၊ ဒါပေ မယ့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်တွေ ဘက်ဟိုးတွေ မြေသယ်ယာဉ်တွေ ကျောက်ဖောက်စက်တွေအားလုံး ကားသော့တွေနဲ့အတူ ထားခဲ့ရမယ်၊ လုပ်ငန်းတွေရပ်ထားလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေရသူတွေအတွက် ဆန်၊ ဆီတွေ ထောက်ပံ့ပေးရမယ်၊ ပြီးယင် ဖားကန့်မှာ လူစုပြီး ဆန္ဒပြရမယ်လို့ပြောခဲ့ တယ်။ ပြောပြီး သိပ်မကြာ ခင်မှာပဲ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆိုးရွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လဟာ ပက်စက်လှတဲ့ အကြံအစည်တစ်ခုကို ဖားကန့်ဘက်မှာ အကောင် အထည် ဖော်ခဲ့တယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ မှော်မောင်းလျှံရွာမှာရှိတဲ့ ဝေကုမ္ပဏီရဲ့ အဆောက်အဦတွေ ကို ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်၊ ဒီကုမ္ပဏီဟာ ဖားကန့်မှာ အတော်ကြီးမားတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ၊ KIO ကိုလည်း ဆက်ကြေးပုံမှန် ပေးခဲ့ပေမယ့် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ငွေပိုလိုလာတဲ့ KIO အဖွဲ့ရဲ့ နောက် ဆုံးတောင်းတဲ့ငွေက သန်း ၂၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီငွေကိုပေးဖို့ နောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ထားတာက သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့လို့ ပြောပါတယ်၊ ကုမ္ပဏီက လူတွေက လုပ်ငန်းမလုပ်ရလို့ သူတို့ပြောတဲ့ သန်း ၂၀၀၀ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်း တောင်းပန်တာတွေ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လက လက်မခံပါဘူး၊ ဖားကန့်ဒေသရဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအားလုံး အတွက် စံနမူနာပြ အပြစ်ပေးခြင်းဆိုပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှာ အကြီးမားဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ KIO ရဲ့ ဖျက်ဆီးမှုကို စီစဉ်ခဲ့တယ်၊ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေဘက်မှာ ကံဆီးဘက်က KIO ၁၀ ယောက်လောက်က ကားနှစ်စီးနဲ့ ဝေမိသားစု ကျောက်စိမ်း တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီဝန်းထဲကို အပြင်းမောင်းနှင်လာပြီး ကုမ္ပဏီက၀န်ထမ်းတွေကို ပစ်ခတ်မောင်းထုတ် ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ပြီး သူတို့မှာအသင့်ပါလာတဲ့ မိုင်းတွေကို စက်သုံးဆီပေပါတွေ၊ ဆီသိုလှောင်ကန်တွေ၊ အဆောက်အဦတွေထဲမှာ အနှံ့လိုက်ကပ်တယ်၊ ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်း ပြန်ထွက်သွားပြီး ၁၀ မိနစ်လောက် အကြာမှာ အဝေးကနေ ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်၊ ပေါက်ကွဲသံဟာ မိုးချုန်းသံလိုပဲ ကျယ်လောင်လှ ပါတယ်၊ သေနတ်သံ ကြားလို့ ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်က ၁၀ ယောက်လောက်ရှိတဲ့ အဖွဲ့ဟာ ပေါက်ကွဲ မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတယ်၊ မပြေးနိုင်လို့ကျန်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ ကလေးသူငယ် ၂၀ ကျော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ ပေါက်ကွဲမှုတွေအတွင်းမှာ အစပျောက်ခဲ့ရတယ်၊ နောက်ဆုံး သိရတဲ့ စာရင်းတွေအရ ကုမ္ပဏီဝန်းထဲက ယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ် အစီး ၅၀ လောက် ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်၊ ဒီလုပ်ရပ်ကို သက်သေပြုပြီး KIO ဟာ အာရှတိုက်ရဲ့အကြီးမားဆုံး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ နိုင်ငံတကာကို သိစေတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်တစ်မျိုးသားလုံး၏ ရန်သူအစစ်... KIA ပင်ဖြစ်ပါသည်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်သေးခြင်းဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ... ဖားကန့် အကြမ်းဖက် ဖောက်ခွဲမှုကြီးက အဖြေပေးခဲ့ပါပြီ၊ KIA အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ကို ဘယ်လောက် အထိ ဖျက်ဆီးနေသလဲ သိမြင်နိုင်ကြပါပြီ၊ တစ်ကယ်တမ်းတော့ KIA ဟာ ကျွန်တော်တို့ ကချင်လူမျိုးတွေကို ကိုယ်စားမပြုသလို ကချင်ပြည်နယ်ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူး၊ KIA ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာ ကန့်လန့်လုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သူပုန်အဖွဲ့တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ ရန်သူအစစ်၊ ကချင်တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ ရန်သူအစစ်ဟာ KIA ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့သလို အနီးဆုံးရန်သူကို ရှာဖွေတိုက်နိုင်ရန် ကချင်တိုင်းရင်းသား အားလုံး ရဲ့ကိုယ်စား ဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ဟွေ့အော့ရွာရှိ UWSA အမှတ် ၅၅၇ တပ်စခန်းတွင် နှစ်ဦး နှစ်ဘက် အဆင့်မြင့် အရာရှိများ စက်တင်ဘာလ ၁၆ နှင့် ၁၇ ရက်နေ့များက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးနောက် တနင်္လာနေ့တွင် ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
“တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း သူတို့က တပ်သား စာရင်းဇယား၊ လက်နက်ခဲယမ်း စာရင်းဇယားနဲ့ အားလုံး ကျနော်တို့ကို ပြန်ပြီး အပ်နှံပေးပါတယ်” ဟု SSA-S ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဆိုင် က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နေရပ်သို့ ခွင့်တောင်းကာ ပြန်သွားသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးမှအပ ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင် အားလုံး မိမိတို့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေသို့ ပြန်လည်ရောက် ရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
“အဲဒီ သုံးချက်လုံး မဟုတ်မမှန်ကြောင်း ကျနော်တို့ဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေက သဘောပေါက်အောင် ဖြေရှင်းပြီး တော့ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးပါတယ်” ဟု စိုင်းလောင်ဆိုင် က ပြောသည်။
SSA-S ဘက်ကမူ မိမိတို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖမ်းဆီးခံရသည့် နယ်မြေသည် မည်သူ့နယ်မြေဟု အတိအကျ မသတ်မှတ်ရသေးသော နယ်မြေသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်တွင် ပြဿနာများ ဆက်လက် မဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းသွားရန်သဘောတူထားသည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုဒေသသည် UWSA နှင့် RCSS/SSA အပြင် အစိုးရတပ်နှင့် အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ ပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့များ လည်း လှုပ်ရှားသွားလာရာဒေသ ဖြစ်သည်။
ဝေဟင်မှ မြေပြင် တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် တရုတ် (တိုင်ပေ) စမ်းသပ်မှု ပြီးစီး
တိုင်ပေ စက်တင်ဘာ ၂ဝ တရုတ်(တိုင်ပေ)သည် ၄င်းတို့၏ ပြည်တွင်းဖြစ် ဝေဟင်မှ မြေပြင် တာဝေးပစ် ဒုံးကျည်အား အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဝမ့်ချန်းဒုံးကျည် များကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အများအပြား ထုတ်လုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဘက် သတင်းဌာန များ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဒေသတွင်း မီဒီယာ တစ်ခုက ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဒုံးကျည်ကို တရုတ်(တိုင်ပေ) တပ်မတော်၏ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ ချွမ်ရှန်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းဖြစ် ချင်းကော့ တိုက်လေယာဉ် များတွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၄င်းဒုံးကျည်သည် လေဆိပ်များကို တိုက်ခိုက်ရန် ထုတ်လုပ်ထားပြီး တရုတ် (တိုင်ပေ) လေတပ်၏ တာဝေး တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ် (တိုင်ပေ) ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်းဖြစ် ဂျက် တိုက်လေယာဉ်များ အဆင့် မြှင့်တင်ရန် အတွက် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှ စ၍ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၇၆ ဒသမ ၃၅ သန်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အဆိုပါ အဆင့် မြှင့်တင်မှု တွင် ဝေဟင်မှ ဝေဟင်ပစ်နှင့် ဝေဟင်မှ မြေပြင်ပစ် ရေဒါစနစ်နှင့် အဆင့်မြင့် အီလက်ထရွန်နစ် စစ်ဆင်ရေး စနစ်များပါဝင် မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ဆောက်သည့်ခေတ် ကာလဖြစ်သဖြင့် တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက်လာသည့် ညီအကိုမောင်နှမများ အပေါ် သျှမ်းပြည် တပ်မတော်မှ ရန်လိုတိုက်ခိုက်ခြင်း ဆန္ဒလုံးဝ မရှိကြောင်း RCSS/SSA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးလောင်ဆိုင် ပြောသည်။ “ အစီအစဉ်ချပြီး သွားတိုက်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ မရှိပါဘူး။ အရင်တုန်းက ရန်သူလို့ သတ်မှတ်တဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်နဲ့ တောင်အပစ်ရပ်ခဲ့ပြီးပြီဘဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်တဲ့ကနေ့ခေတ်ကာလမှာ ကျနော်တို့ တမြေတည်းအတူ နေထိုင်လာတဲ့ မောင်နှမသားချင်းတွေကို ဘယ်လိုလုပ်သွားတိုက်ခိုက်မှာလဲ။
ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအဝ၀ကို ငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးပြီး ဖြေရှင်းဖို့ဘဲပေါ်လစီရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်နယ်အေးချမ်းဖို့အတွက် ရှေ့ဆက်လဲ လက်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်သွား ရဦးမယ်လေ” ဟု ဗိုလ်မှူးလောင်ဆိုင်က သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောပြသည်။
ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့က တောင်ကြီးတိုင်းမ် သတင်းစာမျက်နှာပါ RCSS/SSA က PNLO တပ်ဖွဲ့ကို လမ်းခုလတ် တွင် ခြုံခိုတိုက်ခိုက် ဟူသည့်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်းသံတော်ဆင့်က မေးမြန်းရာ ဗိုလ်မှူးလောင်ဆိုင်က ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ “RCSS/SSA က အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်မှာ ဝ တပ်ဖွဲ့နဲ့ ၊လားဟူပြည်သူ့စစ် ၊ အစိုးရတပ် ၊ SSS ပြည်သူ့စစ် အပြင် PNLO တပ်ဖွဲ့ကိုပါ ပြဿနာရှာသည်” ဟု PNLO တပ်မှူးက ပြောဆိုမှု အပေါ် ဗိုလ်မှူးလောင်ဆိုင်က “ နားလည်မှုမလွဲကြဖို့၊ ထွက်နေတဲ့သတင်းတဖက် တည်းကိုသာ နားမထောင်ဖို့၊ တခြားတပါးသူ၏သွေးထိုးမှုကို နားဝင်ကာ အချင်းချင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ရအောင် သတိထားကြဖို့” ပန်ကြားလိုကြောင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောပြသည်။ “တောင်ကြီးတိုင်းမ်သတင်းကိုလည်း ကျနော်ဖတ်မိပါတယ်။ တိုက်ပွဲက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ကျနော် တို့စီစစ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မောက်မယ်မြို့နယ်ဘက်မှာက ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတွေ ထပ်နေတာ အများ ကြီးရှိပါတယ်။ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကို တမင်သက်သက်တိုက်တာမျိုးတော့ လုံးဝ မရှိပါဘူးလို့ အာမခံ ရဲပါ တယ်။ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ နားလည်မှုလွဲမှားလို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ် ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တခုက ဗမာစစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ပစ်မိ ခတ်မိတာ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆို များသောအားဖြင့် ဗမာစစ်တပ်က ကျနော်တို့ကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေ” ဟု ဗိုလ်မှူးလောင်ဆိုင် ကပြောပါသည်။ မောက်မယ်မြို့ နယ် ကဒူးကြီးဒေသရှိ နားဟီးရွာမှ နမ်းပတက်ရွာသို့ စားနပ်ရိက္ခာ သယ်ဆောင်သည့် ပအိုဝ်း အမျိူးသား လွတ်မြောက် ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO တပ်ဖွဲ့ကို ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့ က သျှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (RCSS/SSA ) က လမ်းခုလတ်တွင် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကြီးတိုင်းမ်သတင်း စာမျက်နှာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်စေချင်တာကတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲဖို့ ကျမတို့ တောင်းဆိုထားတယ်။ ဒါက ပထမအဆင့်ပေါ့။ ဒီနေ့မှာ ငြိမ်းချမ်ရေးနေ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပေါ်ဖို့ ခုလမ်းစနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်သွားရမယ်လို့ ကျမတို့ မျှော်လင့်နေတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်း၍ စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်ပေါ်စေရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။
တိုင်းရင်းသားနှင့် နိုင်ငံရေး အင်အားစု အားလုံး ပါဝင်နိုင်သည့် “သုံးပွင့်ဆိုင်” ကိုလည်း ဆက်လက် မြှုပ်နှံယုံကြည် ဆဲဖြစ်ကြောင်း KNU က ထပ်မံပြောဆိုလိုက်သည်။ သို့အားဖြင့် တိုင်းပြည်တွင်း စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအတွက် တည်ငြိမ်သော အခြေခံတခု ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အားလုံးသဘောတူညီချက်များ ရရှိရန် အာမခံနိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟု သောကြာနေ့ထုတ် ကြေညာချက်က ထပ်လောင်းပြောဆိုထားသည်။
KNU နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တို့ နှစ်ဖက် စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာသင့်သော ကျင့်ဝတ်များ ဆွေးနွေးသည့် ဒုတိယ မူကြမ်းအား စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းက သဘောတူညီထားပြီး လမကုန်မီ နှစ်ဖက် ထပ်မံတွေ့ဆုံမည် ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင် စသည့် ဒေသများတွင် တိုက်ပွဲများ၊ တင်းမာမှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် လက်ရှိ အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများအကြား အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေသည့်အဆင့်မှနောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်သွားနိုင်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) WLB က ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
မြန်မာပြည်သူများအတွက် တရားမျှတပြီး ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးနှင့် အလှမ်း ဝေးသွားမည့် အနေအထားသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားမည်ကို အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း ကြေညာချက်က ဆိုသည်။
သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီအနေဖြင့် တတိုင်းပြည်လုံး အတိုင်းအတာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် အနှစ်သာရ ပြည့်ဝသော ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ထွန်းရေးကို အရှိန်မြင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချိန်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုမှ နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု အဆင့်သို့ လျှောက် လှမ်း နိုင်မည်ဟု WLB က တိုက်တွန်းထားသည်။
ပြည်တွင်းစစ်များ ရပ်စဲရေးအတွက် နေပြည်တော်သို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ် လိုသူများကို အာဏာပိုင်များက တားဆီးလိုက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ကွန်ယက် အဖွဲ့များနှင့် ပြည်သူအများအပြား စီတန်းလှည့်လည်မှု လည်း အာဏာပိုင်များ၏ တားမြစ်ခြင်း ခံရသည်။
ကချင် တိုင်းရင်းသားတစ်ဦး အနေဖြင့် ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် မည်သူ့တွင် အဓိက တာဝန်ရှိသည်၊ မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာနေရသည်ကို စဉ်းစားမိခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်ပါသည်။ မိမိကဲ့သို့ပင် ကချင်ဒေသနေ ပြည်သူများ နိုင်ငံအ၀ှမ်းရှိ တိုင်းရင်းသား များနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူ အားလုံး စဉ်းစားမိမည် ထင်ပါသည်။ မှားယွင်းသည့် အချက်အလက်များ (Wrong information)၊ လွဲမှားစွာ လက်ခံထားသည့် အယူဝါဒစွဲများ (Ideology deviation)၊ ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေးအခေါ်များ (Opposite idea) စသည်တို့ကို အခြေခံသော ရှုမြင်မှုကြောင့် ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေနိုင်ပါသည်။ ရာဇ၀င်သမိုင်းပါ မျက်မမြင်ပုဏ္ဏားများကဲ့သို့ ကိုယ်ထင်ရာ ခန့်မှန်း ပြောဆိုနေခြင်းထက် ပကတိ အမှန်တရားဆိုင်ရာ အချက်လက်များကို စေ့ငုစွာရှာဖွေ ဖော်ထုတ်၍ အဖြေရှာသင့်ပါသည်။
အစိုးရသစ်သည် ၁၈-၈-၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၁)ဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများအား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။
အထက်ပါ အခြေအနေအရပ်ရပ်အပေါ် မှန်ကန်စွာသုံးသပ်ပါက အစိုးရနှင့် စစ်တပ်ဘက်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးများနှင့်အတူ များစွာလိုလားလျက်ရှိပြီး ကချင်ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် KIA ခေါင်းဆောင်များတွင်သာ မူတည်လျက်ရှိပါတော့ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ Pyi Chit Thar facebook ပါ ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသူအမှန်အား သိမြင်စေနိုင်ရန် စေတနာထား၍ ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှား ရှေးဟောင်း ဘိုရိုဘိုဒါ ဘုရားကျောင်း ...
Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွ...
ပုဏ္ဍားကျွန်းတွင် ရထားတွဲ တိမ်းမှောက်၊ ခရီးသည် တချို...
ကျောက်မဲမှ လူငယ်များအကြား မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနှုန်း...
ရှေ့လထွက်ရှိမည့် ကျပ်တစ်သိန်းကျော်တန် 800 MHZ ဖုန်...
ယခုနှစ်တွင် ပုဂံဇုန်သို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဝင်ရော...
ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် စက်သုံးဆီဈေးမြင့်နေ၍ပဲခူးနှင့် ဧ...
စစ်တွေမြို့ မေယုလမ်းမရှိ အစိုးရဋ္ဌာနဆိုင်ရာရုံးများတ...
ဝေဟင်မှ မြေပြင် တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် တရုတ် (တိုင်ပေ) ...
ကျေးရွာနေ လူထုနဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ညဉ်းတွားသံမျာ...
ဒေသခံများ နေ့ပိုင်းတွင် တောင်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပြ...